Ogandà: Tsy Ho Alefa Amin’ny Fahitalavitra Ilay Fanentanana Fihantsian’ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2016 12:13 GMT
Mety hosintonina amin'izy ireo ny fahazoandàlany hiasa raha toa mandefa ilay Fanentanana Fihantsian'ny mpanohitra ireo tranon'ny media elektronika ao Ogandà, tahàka ity iray ity, Voice of Tooro FM. Sary Creative Commons (CC BY 2.0) an'ny Iraka Amerkàna ao Ogandà.
Herinandro latsaka kely taorian'ny nankalazan'ny Ogandey ny Andro Manerantany Ho An'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, noraràn'ny Minisitry ny Fampitàmbaovao sy ny Taridàlana Nasionaly, Jim Katugugu Muhwezi, ireo orinasa mpikirakira ny vaovao mba tsy handrakotra ireo hetsi-panoherana ataon'ny mpanohitra, izay nomen'ireo mpikarakara azy ireny anarana hoe “fanentanana fihantsiana”. Fihetsiketsehana nokarakarain'i Kizza Besigye, mpitarika ny Forum for Democratic Change (FDC), ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Tamin'ny fitodihany tamin'ireo mpiasan'ny fampahalalam-baovao, nolazain’ilay minisitra fa ny fandraràna ny fandrakofana mivantana ireo hetsika ataon'ny FDC dia ho ampiharin'ny Kaomisionan'ny Fifandraisandavitra ao Ogandà miaraka amin'ny polisy, ary izay trano mpandefa vaovao eletronika rehetra mandrakotra ilay fanentanan'ny mpanohitra dia mety hosintonina aminy ny fahazoandàlany hiasa. Tsy nilaza zavatra betsaka momba ny fandrakofana mety hataon'ireo media an-tsoratra izy.
Ny tale mpanatanteraky ny Kaomisionan'ny Fifandraisandavitra ao Ogandà, Godfrey Mutabazi, dia nampitandrina ireo mpampiasa media sosialy tamin'ny fitenenana fa, “Afaka hitarina ho amin'ny media sosialy ilay fandraràna, raha toa izy ka ampiasaina ho fitaovana fanolo hanelezana [ilay] “fanentanana fihantsiana” .”
Mandritra izany fotoana izany, vinavinan'ireo mpikarakara ilay “fanentanana fihantsiana” ny hampiasàna ny vavaka isankerinandro sy ny fihetsiketseham-bahoaka hitakiana fitsirihana mahaleotena ny vokatra azo tamin'ny fifidianana ny ho filoham-pirenena 2016. Ilay fifidianana miteraka resabe, izay natao tamin'ny 18 Febroary, no nitondra ny filoha Yoweri Museveni ho amin'ny fandreseny nahazoany ny fepotoana fahadimy hijanonany amin'ny toerany, tamin'ny vato 60.75%, raha 35% kosa no azon'i Kizza Besigye. Nilaza i Besigye sy ireo mpanohana azy fa nisy hosoka ny fifidianana. Nanakiana ny dingam-pifidianana ihany koa ireo mpanaramaso iraisampirenena sy ireo vondrona mpiaro zon'olombelona.
Namoaka didy ny fitsaràna iray ao an-toerana hoe tsy ara-dalàna ilay fanentanana fihantsiana. Namoahan'ilay fitsaràna didy nilazàny fa fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana Ogandey ny fanatanterahana ilay fanentanana fihantsiana ampiarahana amin'ny tanjona haka ny fifehezana ny governemanta. Tsara homarihana fa ny tanjon'ilay fanentanana dia tsy ny haka mivantana ny fahefana, fa ny hampitahàna ny vokatry ny fifidianana amin'ny alàlan'ireo hetsipanoherana ataon'ny vahoaka. Ny Lalànam-Piarahamonina ao Ogandà dia nitsikera ilay didy, tamin'ny fanindriana fa tsy nihaino afa-tsy feon-dakolosy tokana ny fitsaràna momba ilay olana, dia ny Lehiben'ny Fampanoavana. Ambaran'ny FDC fa tsy hanaiky ilay didim-pèitsarana izy ireo.
Tamin'ny fampiasàna tenifototra roa samihafa ao amin'ny Twitter no nanehoan'ny vondrom-piarahamonina aty anaty aterineto ny heviny momba ilay fandraràna, #PressBan sy #UgandaMediaGag (FandrarànaGazety sy VazivazyMediaOgandà)
Nasongadin'ireo sasany mpampiasa Twitter ny esoeso momba ny fotoana namoahana ilay fandraràna, raha ny hafa indray naniry ny hahita izay hetsika manaraka hataon'ny media:
Mahamay ny taorian'ny #AndroManerantanyHoAnyFahalalanGazety. Tonga ny VazivazyMediaOgandà. Maneso.
Mangetaheta ny hahita ny fomba hamalian'ny media an'io #VazivazyMediaOgandà io. Handràra ny fandrakofana ny hetsika ataon'ny governemanta sy ny antoko eo amin'ny fitondràna koa ve io?
Ny hafa naneso fotsiny izao ilay fanapahankevitry ny governemanta :
Manan-jo tsy hiloa-bava ianao. Azo ampiasaina hanenjehana anao eny amin'ny fitsaràna ny bitsika alefanao .
Amin'ny firesahana ilay fandrahonan'ny ministera ataony an'ireo mpanao gazety an-tserasera, hoy ny nosoratan'ity mpampiasa Twitter ity :
Sambany mba hain'izy ireo ny teny hoe Mpanao Gazety Dizitaly. Mety hampihomehy ny fandrahonan'ireto olona avy any anaty akata
Farany, nivanàka tamin'ilay fihetsika ny Iraka Amerikàna ao Ogandà :
Tokony ho afaka hanapaka hevitra samirery momba izay vaovao ho ampiasainy mba hanànana safidy voazava tsara momba ny fireneny ireo olompirenena Ogandey